बिन्दास आयंका, कति सम्म खुल्ने ? « Ramailo छ
बिन्दास आयंका, कति सम्म खुल्ने ?
प्रकाशित मिति : Dec 7, 2018
नायिका प्रियंका कार्की प्रेमी आयुष्मान देशराज जोशीसँग चाँडी बिबाह गर्दैछिन् । आयंका कपलले यसै साल औंठी साटेका हुन् । इन्गेजमेन्ट पछि प्रियंका र आयुष्मान झन खुल्न थालेका छन् ।
आलोचना नै किन नहोस् प्रियंका र आयुष्मान सामाजिक सञ्जालमा इन्टिमेट फोटो राख्न डराउँदैनन् । विशेष गरी प्रियंका र आयुष्मानले एक अर्कालाई गर्ने प्रेमयुत्त तस्बिरहरु सार्वजनिक हुँदा विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी हुने गर्दछ । जे भएपनि उनी आफ्ना रमाइला र अविष्मरणीय पलले सबै सामु सेयर गर्दछन् ।
हालै प्रियंकाले आफनो इन्स्टाग्राममा आयंका जोडिको फोटो पोस्ट गरेकी छन् । जोडोको समयमा उनीहरु भने निकै हट अवतारमा देखिएका छन् । उनले फोटो सहित स्टाटस पनि लेखेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘जाना सुनौलो जीवनमा न्यानो छ ।’
‘कथा काठमाण्डु’ र ‘चङ्गा चेट’ फिल्ममा सँगै अभिनय गरेका यो जोडि अहिले ‘प्रेम दिवस’ को छायांकनमा व्यस्त छन् । फिल्ममा व्यस्त भएपनि उनीहरु आफनै दुनियाँमा मस्त छन् ।